Escherichia Coli Infection (Escherichia Coli ပိုးဝင်ခြင်း ဆိုတာဘာလဲ) - Hello Sayarwon
Escherichia Coli Infection (Escherichia Coli ပိုးဝင်ခြင်း ဆိုတာဘာလဲ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Escherichia Coli Infection (Escherichia Coli ပိုးဝင်ခြင်း ဆိုတာဘာလဲ)
Escherichia Coli Infection (Escherichia Coli ပိုးဝင်ခြင်း ဆိုတာဘာလဲ) ကဘာလဲ။
E-Coli အီကိုလိုင်းဆိုတာဟာ လူတွေရဲ့ အစာခြေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေရဲ့ နာမည်ပါ။
အီကိုလိုင်းပိုးအမျိုးအစားအများကြီးရှိပြီး အများစုကတော့ အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အချို့သောပိုးတွေကတော့ သွေးဝမ်းသွားခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သွေးအားနည်းရောဂါ သို့မဟုတ် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းတွေကိုဖြစ်စေပြီး အသက်အန္တရာယ်ကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
Escherichia Coli Infection (Escherichia Coli ပိုးဝင်ခြင်း ဆိုတာဘာလဲ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Escherichia Coli Infection (Escherichia Coli ပိုးဝင်ခြင်း ဆိုတာဘာလဲ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အီကိုလိုင်းပိုးဝင်ခြင်း ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံး ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ အပျော့စားဝမ်းပျက်ခြင်းနဲ့ အရည်တွေသာသွားခြင်းမှသည် ပြင်းထန်ပြီး သွေးဝမ်းသွားသည်ထိ
အချို့သူတွေကတော့ အော့အန်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Escherichia Coli Infection (Escherichia Coli ပိုးဝင်ခြင်း ဆိုတာဘာလဲ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အီကိုလိုင်းအမျိုးအစားတွေအများကြီးထဲမျာမှ အနည်းငယ်လောက်ကသာ ဝမ်းပျက်စေတာပါ။ O157:H7ပါဝင်တဲ့ အီကိုလိုင်းအုပ်စုဟာ စွမ်းအားပြင်းအဆိပ်တစ်မျိုးကိုထုတ်ပေးပြီး ဒါက အူသိမ်ရဲ့ အနားသားတွေကို ဖျက်စီးပျက်စေတာကြောင့် သွေးဝမ်းသွားတာကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားတွေပိုပြီး ဝင်လာလေလေ အီကိုလိုင်းအခြေအနေပိုဆိုးလာလေလေပါပဲ။ အခြားသော ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေနဲ့ မတူတာကတော့ အီကိုလိုင်းဟာ ပမာဏနည်းနည်းလေးကူးစက်ခံရရင်တောင် သင့်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ သိပ်မကျက်သေးတဲ့ ဟမ်ဘာဂါကို စားမိတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ရေကူးကန်ထဲကရေတွေ ပါးစပ်ထဲဝင်မိ၊ သောက်မိတာမျိုးနဲ့တောင် အီကိုလိုင်းကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရနိုင်ပါတယ်။ ထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ အီကိုလိုင်းပိုးဝင်ခြင်းကတော့ညစ်ညမ်းနေတဲ့ စားစရာတွေ၊ ရေတွေနဲ့ လူလူချင်းကူးစက်တာကြောင့်ါ။ ကူးစက်ခံရနိုင်ချေ အများဆုံးနည်းလမ်းကတော့ မသန့်ရှင်းတဲ့ စားစရာတွေကို စားသုံးမိခြင်းပါပဲ။ ဥပမာ – Ground Beef ။ ။ ဒီကျွဲ၊ နွားတွေကို ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့အူထဲက ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ အသားတွေပေါ် ကူးပြောင်းသွားကြပါတယ်။ ဒီအသားကို ဘယ်အသားနဲ့မဆို ရောနှောလိုက်တာနဲ့ ပိုးတွေ ကူးစက်နိုင်ချေ မြင့်မားသွားပါပြီ
မကြိုရသေးသော နို့။ ။ နွားရဲ့နို့အုံထဲမှာ သို့မဟုတ် နို့ညှစ်ကိရိယာတွေထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အီကိုလိုင်းဘက်တီးရီးယားဟာ နို့အစိမ်းထဲကို ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ပြန့်ပွားခြင်း။ ။ နွားမွေးမြူရေးခြံတွေက အခြားသော စိုက်ပျိုးရေးခြံတွေဆီ ပိုးတွေကို ပြန့်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ အချို့သော အသီးအရွက်တွေ ဥပမာ ဟင်းနုနွယ်နဲ့ ဆလပ်ရွက်တွေဟာ ဒီလိုကူးစက်ခြင်းကို အထူးသဖြင့်ခံရဆုံးပါပဲ။
လူတွေနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေရ့ မစင်တွေဟာ မြေနဲ့ ရေတွေ၊ စမ်းချောင်း၊ မြစ်၊ ကန်ထဲက ရေတွေအပါအဝင် ကောက်ပဲသီးနှံတွေအတွက်ရေသွင်းစိုက်ပျိုးရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ရေတွေကိုပါ ညစ်ညမ်းပေါတယ်။ အများပြည်သူသုံးရေပေးဝေစနစ်မှာ ကလိုရင်းတွေ၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေ သို့မဟုတ် အိုဇုန်းတွေကို e.coli ပိုးတွေသတ်နိုင်ဖို့ အသုံးပြုသော်ငြား အချို့သော ချို့ယွင်းချက် အနည်းငယ်ကနေတစ်ဆင့် စည်ပင်ရေပေးဝေစနစ်ကို ကူးစက်သွားတာမျိုးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်ရေတွင်းတွေကလည်း ပိုပြီး စိတ်ပူစရာကောင်းတာက သူတို့မှာ ပိုးသတ်စနစ် လုံးဝမရှိလို့ပါပ။ ကျေးလက်ဒေသက ရေရင်းမြစ်တွေမှာ ကူးစက်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။ အချို့သောသူတွေကတော့ ရေကူးကန် သို့မဟုတ် မစင်နဲ့ထိတွေ့ပြီး ဖြစ်တဲ့ ရေကန်တွေမှာ ရေကူးရင်းကနေ ကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။
Coliဘက်တီးရီးယားတွေဟာ လူတစ်ယောက်ကနေတစ်ယောက်ကိုလည်း အလွယ်တကူကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လက်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် သေချာမဆေးတဲ့ လူကြီးတွေနဲ့ ကလေးတွေကို ပိုပြိး ကူးစက်လွယ်ပါတယ်။ E. coli ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ကလေးရဲ့ မိသားစုဝင်တွေဆို ပိုပြီးသတိထားရပါလိမ့်မယ်။ ကလေးတွေကြားထဲ ကူးစက်ပြန့်ပွားခြင်းဟာ တိရစ္ဆာန်ရုံတွေလည်ပြိး ကျေးလက်ဒေသက တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ထိတွေ့မှုရှိသူတွေမှာ ပိုပြီးအဖြစ်များပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Escherichia Coli Infection (Escherichia Coli ပိုးဝင်ခြင်း ဆိုတာဘာလဲ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အီကိုလိုင်းပိုးကူးစက်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
အသက်အရွယ်။ ။ ကလေးငယ်တွေနဲ့ သက်ကြီးပိုင်းတွေမှာ အီကိုလိုင်းပိုးကြောင့် နာမကျန်းဖြစ်နိုင်ချေ များပြီး ပြင်းထန်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ ဖြစ်နိုင်ချေလ်း များပါတယ်။
ခုခံအားနည်းခြင်း။ ။ ခုခံအားစနစ်အားနည်းခြင်း ဥပမာ AIDS ရောဂါရှိသူ သို့မဟုတ် ကင်ဆာရောဂါကို ကုသဖို့ ဆေးတွေ သုံးစွဲနေရသူ သို့မဟုတ် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစားထိုးခံထားရသူ စတဲ့သူတွေမှာ အီကိုလိုင်းပိုးကြောင့် နာမကျန်းဖြစ်နိုင်ချေ များပါတယ်။
အချို့သော စားစရာများ။ ။ အန္တရာယ်များတဲ့ စားစရာတွေထဲမှာတော့ မကျက်သေးတဲ့ ဟမ်ဘာဂါတွေ၊ မကြိုရသေးတဲ့နို့တွေ၊ ပန်းသီးဖျော်ရည် သို့မဟုတ် ပန်းသီးရှာလကာနဲ့ နို့စိမ်းကနေလုပ်ထားတဲ့ ချိစ် စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။
အစာအိမ်အက်စစ်လယ်ဗယ်နိမ့်ခြင်း။ ။ အစာအိမ်အက်စစ်ဟာ အီကိုလိုင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် အကာအကွယ်တွေထုတ်ထားပါတယ်။ တကယ်လို့များ အစာအိမ်အက်စစ်လယ်ဗယ်ကို လျှော့ချတဲ့ဆေးတွေ သုံးခဲ့ရင် ဥပမာ esomeprazole (Nexium), pantoprazole (Protonix), lansoprazole (Prevacid)နဲ့ Omeprazole (Prilosec) စတဲ့ဆေးတွေကိုသုံးစွဲခဲ့ရင်တော့ အီကိုလိုင်းဝင်နိုင်ချေ များပါတယ်။
Escherichia Coli Infection (Escherichia Coli ပိုးဝင်ခြင်း ဆိုတာဘာလဲ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အီကိုလိုင်းပိုးကူးစက်ခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ နာမကျန်းမှုဟုတ်မဟုတ်ကို စစ်ဆေးဖို့ဆိုရင်တော့ မစင်နမူနာကို ဓါတ်ခွဲခန်းတွေမှာ စစ်ဆေးပြီး အီကိုလိုင်းဘက်တီးရီးယားရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးရမှာပါ။ ဒီဘက်တီးရီးယားတွေကို ရောဂါကို အတည်ပြုဖို့နဲ့ ဘယ်လိုအဆိပ်မျိုးလဲ ဥပမာ E.Coli O157:H7 ကထုတ်ပေးတဲ့ အဆိပ်မျိုးလားစသဖြင့် စစ်ဆေးအတည်ပြုရပါတယ်။
Escherichia Coli Infection (Escherichia Coli ပိုးဝင်ခြင်း ဆိုတာဘာလဲ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အီကိုလိုင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ နာမကျန်းဖြစ်မှုတွေအတွက် ဒီပိုးကူးစက်မှုကို အလုံးစုံပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ ကုသမှုမျိုးကတော့ လက်ရှိအချိန်ထိမရှိသေးဘဲ လက္ခဏာတွေကို သက်သာစေဖို့နဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့သာ ရှိပါသေးတယ်။ လူအများစုအတွက် ကုသမှုနည်းလမ်းတွေကတော့ အနားယူခြင်း၊ ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတို့ကို ကုသနိုင်ဖို့အတွက် အရည်များစတာတွေပါပဲ။ ဝမ်းပိတ်ဆေးတွေသောက်တာမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဒီအရာက သင့်ရဲ့ အစာခြေစနစ်ကို နှေးကွေးသွားစေပြီး သင့်ခန္ဓါကိုယ်ကနေ အဆိပ်တွေကို ဖယ်ရှားခြင်းကိုလည်း ရပ်တန့်သွားစေပါလိမ့်မယ်။ ပဋိဇီဝဆေးတွေကိုလည်း ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ပေးလေ့မရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီအခြေအနေအတွက်ဆိုရင်တော့ ဒီဆေးတွေကို ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို ဦးတည်လာစေပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်မှာ ပြင်းထန်တဲ့ အီကိုလိုင်းပိုးကူးစက်မှုဖြစ်နေပြီး ဒါက hemolytic uremic syndrome ကိုဖြစ်စေခဲ့ရင် သင့်ကိုဆေးရုံတင်ရမှာဖြစ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးကုသမှုတွေခံယူရပါလိမ့်မယ်။ ဒီထဲမှာတော့ IV Fluid တွေ၊ သွေးသွင်းရတာတွေနဲ့ ကျောက်ကပ်ဆေးရတာတွေ ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက အီကိုလိုင်းပိုးဝင်ခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် အီကိုလိုင်းပိုဝင်ခြင်းကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အရည်ကြည်။ ။ ရေ၊ ဆိုဒါအကြည်၊ ဟင်းရည်၊ Gelatin နဲ့ ဖျော်ရည် (Juices) တွေစတဲ့ အရည်ကြည်တွေကို များများသောက်ပေးပါ။ ပန်းသီးနဲ့ သစ်တော်သီးဖျော်ရည်တွေ၊ ကဖိန်းနဲ့ အရက်တွေကို ရှောင်ပါ။
အစာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစားပါ။ ။ သင်နေလို့ကောင်းလာစမှာတော့ အမျှင်နည်းတဲ့အစာတွေကိုပဲ အရင်ဆုံးစားပါ။ ဆိုဒါခရက်ကာတွေ၊ ပေါင်မုန့်၊ ကြက်ဥ သို့မဟုတ် ထမင်းတို့ကို စားကြည့်ပါ။
အချို့သော စားစရာတွေကို ရှောင်ပါ။ ။ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ အဆီများတဲ့စားစရာတွေ၊ အမျှင်ဓါတ်မြင့်မားစွာပါဝင်တဲ့ စားစရာတွေ သို့မဟုတ် အရသာပြင်းလွန်းတဲ့စကားစရာတွေက သင့်ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ပိုဆိုးစေပါတယ။်
E. Coli Infection From Food or Water - Topic Overview. http://www.webmd.com/a-to-z-guides/tc/e-coli-infection-topic-overview#1. Accessed 26 Feb 2017.